I-Catfish Nursery - Ukulungisa Ukutshala I-Catfish • U-Yurie BSF
Indlela Yokulondoloza Izilwane Ezifuywayo - Ukulima Ukulungiswa Kwezinhlanzi
Indlela yokuzala i-catfish
Sicela usize ngesayensi yombuzo futhi uphendule ngokuzalana kwezinhlanzi
lokhu ku-SHARE (okwabiwe)
kumithombo yezenhlalo njenge-WA, FB, G +, Pinterest, LinkedIn Twitter njll.
Sethemba ukuthi lolu lwazi lokwabelana ngosizo lungaba imali yethu ezikhathini zokugcina. Aaamiinn
Okuqukethwe kwakho kuya lapha. Hlela noma ususe lo mbhalo ngaphakathi kwe-inline noma kuzilungiselelo zokuqukethwe zesimoduli. Ungase futhi udwebe zonke izici zalokhu okuqukethwe kuzilungiselelo zeModyuli yeModemu futhi usebenzise nesifiso CSS kulo mbhalo ku-module Izilungiselelo ezithuthukisiwe.
Kungaba ngaphandle kwe-aeration?
Ukuhlanza i-fishfish ngaphandle kwe-aeration kungenzeka, kodwa kukhona ingozi yokukhula i-larva i-catfish ihamba kancane.
Futhi inani lembewu yenhlanzi eligcinwe emanzini alinakuningi.
Uma iningi lezinhlobo zembewu liyobe lingekho emoyeni futhi lingabangela ukufa.
Kumele kuqondwe ukuthi inhloso ye-aeration echibini lokuhlambalaza ukwandisa inani le-oksijeni echibini, ukuze sikwazi ukwandisa inani le-catfish seed stock in echibini.
Indlela yokubhekana namachibi amachibi angama-moss amaningi?
Ngokunikeza i-pedestal ngenhla echibini le-larva pool. Leli phasi eliyisihenqo selanga liya ngqo echibini. Ukuze ukukhula kwe-moss kungancishiswa.
Yenza ukuhlanza amantombazane ngesithuthuthu esimnyama.
Futhi udinga okungenani kanye ngesonto uthola usawoti, i-PK noma i-metalin blu. Ingxenye nje encane yesimiso esibalulekile.
Ubungako obuhle be-stocking ngayinye imitha yesikwele?
Ukubeka amanani amanani emitha ngayinye ingabalwa ngokuphindaphinda i-pool PxLxT.
Isibonelo, amachibi ezinhlanzi ze-catfish ekulinganisa i-280cm x 300cm x 25cm enezinga lamanzi eliphakathi kwe-10 - 15cm kanye nokugeleza kwamanzi, ichibi lingakwazi ukufaka izimbewu ze-50.000 kuze kube yilapho liba ngu-2 - 3.
Iyini ukuqina okuqinile ngobukhulu be-600cmx200x65cm?
Ukufunda kusenesikhathi kungaba phakathi komsila we-500 - 1.000.
Kuzoze kube nini imbewu ye-catfish inikezwa nge-powder pellets noma i-fengli?
Imbewu yezinambuzane eziqala ezinsukwini ezine zinganikezwa nge-powder pellets kodwa kuphela ngemali encane.
Inhloso yokuhlinzeka ngamapulangwe okuphakelayo ama-catfish izimpungushe ukwandisa amandla kusuka ku-carbohydrate ukuze izimpungushe ze-catfish ziphilile futhi ziqinile
Kodwa kusadingeka unikezwe izibungu ze-silk njengendlela yokuhlinzeka ngamaprotheni, kulabo abanenkinga yokuthola izibungu ze-silika bangashintshwa i-maggot pasta.
Ukunamathiswa kwe-Maggot kwenziwa kumaggot noma izimpethu noma izibungu ezivela black fly noma isosha elimnyama libale.
Indlela ilula, efana nokwenza unamathisela kusuka ezimpilweni ze-silika.
Yilokho okubalulekile okuluhlaza okwenziwe ngumbomvana wamaggot ohlanganiswe nezinye izithako bese ku-blender.
Ngaphambi kokuyisebenzisa, yigcine esiqandisini samahora we-24 ukuze inqubo yokuvuna yemvelo yokwandisa okuqukethwe kwayo okunomsoco ingaba ngaphezulu kakhulu.
Ukuze uthole ukuxuba okuphelele, ungabona iwebhusayithi www.YurieBSF.com
Mangaki amagremu ama-pellets we-powder noma ama-fengli anikezwa ukupha izimpungushe ze-catfish?
I-Pengli powder pellets inikezwa ngegramu eyodwa. Indlela yokuphatha ingasakazwa ngokuqondile emathunzini ase-catfish.
Udla kanjani izimpungushe zezinhlanzi, udinga ukuya kuma-bibisi kuqala?
Ukudla kumele kube "okuhlwanyelwe" okokuqala, ngenhloso yokukwenza ukuze ukudla kudlule ngaphandle kwesisu sezinhlanzi, ukuze izinhlanzi zisheshe zigcwale futhi zigweme ukuvimbela.
Indlela yokuzala kanje:
Phala amanzi kancane kancane kokuphakelayo, qiniseka ukuthi ungadaka.
Faka kuze kuhlanganiswe.
Vumela ukudla okubhaliwe kukhishwe ngamaminithi we-15 - 30 kuze kube khona ukuphawula lapho kuzizwa zikhulu noma ithenda.
Ngaphezu kwalokho, i-catfish izibungu zikulungele ukufakwa.
Spread feed ngokulinganayo. Inani lihlelwe kancane kancane.
Nikeza kuze kube yilapho i-catfish izibungu igcwele, Misa uma izibungu ziqala ukubonakala zingakabi nokulangazelela ukudla.
Qinisekisa ukuthi akusikho ukudla okuningi okungadliwa izimpungushe. Ungavumeli ukuthi okuningi kuhlale phansi phansi echibini okuzoba yi-ammonia noma ubuthi bezinhlanzi ze-catfish.
Unika kanjani isikhwama esihle sesilika?
Ukuze uthole imiphumela esiphezulu, ukunikeza izigubhu kumele ulandele izinyathelo ezilandelayo:
Isinyathelo sokuqala, izibungu ze-silk zimboziwe kuqala, ukuze udoti ludliwe okungenani elilodwa noma amabili izinsuku.
Okulandelayo, ngaphambi kokugeza, hlambulula amanzi aze ahlanzeke ngokuphelele.
Qinisekisa ukuthi azikho izidumbu ze-casut kanye ne-buildup of work izibungu phansi kwechibi elibangela ukuthi izinga lezamanzi linciphe.
Zingaki izikhathi zokudla ngesikhathi semvula?
Uma isikhathi sezimvula sondla siqiniseke ngemuva kokuba imvula ikhiphe ihora elilodwa noma amabili, ukuze isondlo singaxubaniswa namanzi emvula.
Uma ubukhulu bemvula bude, ukondla kukwanele kabili ngosuku, lokhu kungukunikeza isikhathi sokudla esidliwe futhi sithandwa kangcono yi-catfish.
Gwema ukudla uma kuvula noma sekuphelile imvula, inhlanzi edlalwa lapho imvula ingaba yingozi yokugula.
Ngoba ukudla okudliwe kuzohlanza emuva bese kwenza amanzi echibini abe ngodaka oludaka.
Omunye umphumela omubi wukuthi izimo ezifana ne-fungus ziyokwanda futhi zidale ubuhlungu bezinhlanzi.
Iyini isondlo engcono kakhulu emva kokususa isikhunta?
Le ndlela ifafazwa kancane kancane.
Ukuphathwa kwe-casti kusenziwa ngo-gram eyodwa.
Noma okungcono kakhulu kunika i-maggot pasta.
Ngemuva kwezinhlanzi ezinamandla zenhlanzi zinganikwa i-PSC premium. Noma ukugcina ezindleko zokuphakelayo ama-pellets ama-maggot amaprotheni aphezulu.
Ngaphandle kokuqukethe umsoco ophelele kanye namaprotheni aphezulu, izindleko zokwenza amapelisi amaggot ashibhile kakhulu, kuphela azungeze i-3.000 / kg.
Lokhu kuyimfihlo ye-catfish enkulu yenzuzo, okuyisidlo se-pellet esishibhile kepha esinomsoco kakhulu.
Yisiphi esinye isondlo esinikezwayo sokwenza i-catfish fast?
Ama-BSF ama-Maggot, izinkukhu, izinkukhu njll.
Ukuze izindlela ezilula futhi ezishibhile zokwenza i-maggot ngokwayo, indlela yokuyivula ku-Google, www.YurieBSF.com
Uvimbela kanjani imbewu ye-1 - 2 ye-catfish ekusakazeni isikhunta esimhlophe?
Isimbangela sesifo somswakama omhlophe ukuthi i-pool igxile ekukhanyeni kwelanga eligcwele futhi amanzi aphezulu kakhulu.
Izici zokuqala ziyizibungu ezibomvu zamanzi futhi amabala amhlophe, okungukuthi amakhowe.
Ukuze ugweme le nkinga, ngenhla echibini unikezwa uphahla, noma kungaba ngokunikeza amaqabunga amabhanana asebenze njengophahla.
Iyini imbangela yesikhumba esiseduze nesiphetho se-patili?
Isibungu esiseduze ne-patil fin ngenxa yemiphumela emibi yokudla okusele okuba yi-ammonia.
Ngaphezu kwalokho, kubangelwa futhi inani elikhulu le-mucus ngaphansi kwechibi.
Isixazululo ukuhlela inani lemfuyo ukuze kungadli kakhulu futhi kube umthombo wobuthi wezimpungushe zezinhlanzi.
Hlanza i-pool njalo ihlanganisa nokuhlinzeka ngamanzi ukuhambisa ukususa i-ammonia ekhona.
Kungani kukhona izibani ezinhlokweni ze-catfish?
Esinye isizathu kungenxa yokuthi amanzi anamafu kakhulu.
Ukuze unqobe lokhu, buyisela amanzi, futhi wengeze ama-probiotics.
Ama-probiotics uma ukuvimbela kunganikwa amaqabunga e-papaya njalo.
Noma sebenzisa ama-probiotics avela kukhishwe amaqabunga e-Noni.
Ungalanda ukufundisa kuwebhusayithi www.YurieBSF.com
Yini eyenza izinhlanzi ziqhubekele phezu kwamanzi?
Isizathu sezinhlanzi eziqubuzelayo singaba ngoba iningi lezinkomo linikezwa, noma ngenxa yesimo sezulu esibanda.
Indlela yokubhekana nenhlanzi ehambayo?
Isinyathelo sokuqala ukunikeza i-metallin blu, bese kuba amahora amathathu bese ubeka amanzi esikhundleni se-50%.
Isinyathelo sesibili, qinisekisa ukuthi ukudla okulandelayo kuncishisiwe, futhi kuqala kuqala ngaphambi kokukunikeza ukudoba.
Kulabo ababeka isikhala ngaphansi kwe-tile yendlu.
Qinisekisa ukuthi amanzi emvula awela ngaphakathi kwetile ayifinyeleli ngokushesha echibini, ngoba ama-moss abamnyama avela ku-tile aqukethe ubuthi.
Yini ebangela ukuqhuma okubomvu esiswini eduze kompheme?
Isizathu esiyinhloko salesi sifo sibonelo sokudla ngokweqile.
Ukondla ngokweqile kuyokwenza ukuthi inqwaba yezinsalela zihlale phansi phansi echibini elixubene nenhlanzi lezinhlanzi futhi libe yizifo zezifo.
Isixazululo ukuhlonza ngesiteshi esingaphansi sechibi. Futhi wabeka isabelo sokudla esingasakazeka noma sihlakazeke kakhulu.
Kuhle ukuthi ungangeze i-curcuma?
Kuhle kakhulu, ukungeza izinongo ngendlela ye-ginger noma i-ginger noma i-garlic noma amaqabunga e-betel abilisiwe kakhulu kusiza ukwandisa ukuqina kwezinhlanzi.
Lezi zitshalo zemvelo nazo zinhle njengama-probiotics emvelo.
Ungabhekana kanjani nokuma i-catfish?
Nazi ezinye zezindlela zokubhekana ne-catfish emi:
Lahla amanzi aphansi echibini.
Hlukanisa i-catfish yokulenga
Pushisa ama-clove angaphansi kwe-3-5 bese ufafaza echibini
Ufafaze usawoti usawoti echibini le-catfish.
Fafaza ngemithi eluhlaza okwesibhakabhaka endaweni echibini le-catfish.
indlela engenhla futhi iyisisombululo sokunqoba i-catfish mucus ibhubha, amanzi aguqukile noma aphuzi kalula.
Zingaki izinsuku emva kokuhlwanyela imbewu yezinhlanzi zihlungwa?
Yenza uhlobo lokuqala emva kwezinsuku ze-15.
Kodwa lokho okuthathwe kuyanele bendolan noma nje plentongan.
Ezinsukwini ezinhlanu kamuva, ingabe ukuhlunga okuphelele.
Ungahlungi izinhlanzi eziphelele ngaphansi kweminyaka engu-15 ngosuku, lokhu kungaba yingozi yokufa kwezinhlanzi.
Amanzi alungile kangakanani okwenziwe i-catfish hatchery?
Izinga lamanzi akumele lidlule i-20cm.
Ingabe umbala wamanzi obomvu unelungelo lokudoba izinhlanzi?
Uma nje ukukhula kwenhlanzi evamile akuyona inkinga.
Uma kwenzekani kungcono, khona-ke yenza ukwelashwa ngama-probiotic avamile.
Uyenza kanjani imbewu ye-3-4 inhlanzi ingafi kalula?
Ukwenza lokhu ngokuqinisekisa ukuthi ichibi livulekile elangeni, futhi u-¼ ingxenye yamachibi kufanele ahlanganiswe namahlamvu ebhanana njengesibonelo.
Uma isimo sechibi ngaphandle kwephahla futhi senza leli chibi likhanyise ilanga usuku lonke, khona-ke yenza ushintsho lwamanzi cishe no-30 - 50%
Imbewu ingakhula kanjani ngokugcwele?
Indlela elula ukunikeza imbewu enomsoco, ukudla okunomsoco kanye namaprotheni aphezulu.
Kodwa uma uthenga ukudla ngalezi zindlela esitolo, ngeke ukwazi ukudla izindleko.
Ngakho-ke okunye okumele kube khona kufanele kube ukondla ngokwakho okuhambisana nezidingo zamabhungane ezinhlanzi ezincane ezindleko.
Okubizwa ngesimangalo noma umlenze noma izibungu isosha elimnyama libale.
Le ndlela yilapho i-larva yezinhlanzi ikhona izinsuku ezine ubudala, i-maggot iqoshiwe noma ihlanganiswe futhi inikwe izimpungushe ze-catfish.
Nikeza ngokulinganayo ukuze zonke izibungu ezinhlanzi zithole izingxenye zazo.
Phakamisa i-kakaban ukuze isondlo se-maggot singamatheli futhi sixazulule.
Kufanele uphinde ufake amanzi kangaki?
Ukufakwa kwamanzi kufanele kususelwe ezimweni zamanzi. Ngoba isifunda ngasinye sinamazinga ahlukene wekhwalithi yamanzi.
Isici samanzi kufanele sithathwe ngokushesha uma amanzi echibini eqala ukuphuma embi.
Noma lapho inhlanzi isiqalile ukubheka ukungahambi kahle.
Ukuguqulwa kwamanzi akukona konke ngesikhathi esisodwa, kodwa kuphela isigamu esiphezulu futhi senziwa futhi ngosuku olulandelayo kuze kube yilapho inhlanzi ibheka emuva ihamba ishiya.
Ubhekana kanjani ne-catfish, okuyi-buds yokukhula?
Izimbangela eziningi zokukhula kwe-catfish e-kuntet, ngokuvamile ngoba indlela yokudla ayilungile futhi ikhwalithi yesondlo enikeziwe nayo ibuye ibe nekhwalithi encane.
Inkinga yobukhulu bezindleko zokudla kwenzeka ezindaweni eziningi.
Ngakho-ke abalimi be-catfish kumele babe nokuziqhenya ekwenzeni ukudla kwabo.
Isixazululo esisodwa ukudala ukudla okunye okuvela kumaggot.
Imininingwane yokwenza okunye okuphakelayo kusuka kumaggot kungabonwa kuwebhusayithi ye-BSF yurie.
On google uhlobo yurie bsf noma uhlobo www.yuriebsf.com
Indlela yokwenza amanzi echibini aluhlaza?
Okungcono akuwona umbala wamanzi aluhlaza okhethwayo, kodwa kunezilwane ezincane ezincane eziphilayo ezikhungweni zamanzi.
Ngoba ukutholakala kwezilwane ezincane eziphilayo kubonisa ukuthi amanzi asemqoka ukuba sisakaze imbewu.
Izilwane ezincane ezinjengezimpungushe ezimiyane, i-zoo plankton kanye nabanye ngaphandle kwamanzi ahloniphekile okufanele asakaze izinhlanzi kanye nokudla okungeziwe ngenhlanzi ngokwayo.
Nansi indlela eyodwa yokwenza okusheshayo amanzi okudoba:
Ukufakwa kwamanzi ahlanzekile, Amanzi ahlanzekile angavela emanzini amanzi noma emanzini asemhlabathini.
Uma kungekho amanzi ahlanzekile futhi ufuna ukusebenzisa amanzi atholakala emanzini, kufanele kufakwe okungenani izinsuku ezintathu ukuze izinsimbi nezinhlayiyana ezingekho kahle zifinyelele phansi kwesitsha.
Isinyathelo esilandelayo sifaka umquba ngokufaka isikhwama esisodwa semanyolo bese sisishiya isonto elilodwa noma amabili.
Ukuphathwa kwama-probiotic nakho kuhle futhi kusiza ukusheshisa amanzi echibini ukuya eluhlaza.
Ngemuva kweviki elilodwa noma amabili amanzi azophendulela okuhlaza futhi kuzoba nezimpungushe eziningi zezinambuzane nezinye izilwane ezincane.
Indlela yokubhekana namachibi amanzi?
Esinye sezimbangela zamachibi okugcoba ukuthi ukudoba kwenhlanzi echibini kuphezulu kakhulu.
Uma kwenzeka lokhu, yenza ucwecwe ngokuhlukanisa noma ukuhlukanisa izinhlanzi zibe ngamachibi ahlukene.
Kungani amaqanda amaningi athola, kodwa abaningi bafa?
Inombolo yabantu abafa kungaba ngoba ikhwalithi lomama alungele.
Ngakho-ke, qiniseka ukuthi i-catfish brood stud kufanele isilungele ngempela.
Qinisekisa ukuthi ukunakekelwa kwe-catfish broodstock kufanele kunikezwe ukudla okuphezulu-amaprotheni futhi kuqedele ukudla okunomsoco nokunakekelwa okukhethekile ngaphambi kokuvela
Ukwenza kanjani izimpungushe ezimbi?
Nikeza okuphakelayo okunomsoco onjenge-magg BSF.
Yondla imbewu kuqala ngaphambi kokuba unike futhi unike i-ginger noma amaqabunga e-papaya ngokusika izicucu ezincane njengama-probiotics emvelo ngamapulangwe.
Ukutshala kwe-BSF Media Bran Maggot
Indlela Yokushayela Imfuyo Yamagogane e-2019 BSF
Indlela Yokuvotela I-Rice Bran / Rice Rice Bran for Feedfish
Ukusetshenziswa kwekhekhe le-Palm Oil for Feed Feed
Indlela yokuzala iSangkuriang 2019 Catfish